EOTC Afaan Oromo – Page 3 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu Waaqa Tokko Ameen!!! Guyyaa kanatti durba kan Mana Kiristaanaa Haadha keenya Qulqulleettii Arseemaatu kabajame, godaansi foon ishees guyyaa kana raawwate (iddoo awwaalcha duraatii gara iddoo Mana Kiristaana amma jiruutti fudhatame). Akkasumas, ishee waliin kan wareegaman godaansi foon Durboota digdamii torbaas guyyaa kana raawwate. Mootichi Dirxaadis Qulqulleettii Arseemadhaan “kabaja […]
December 13, 2019 in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
UNESCO irratti galmaa’uun Ayyaana Cuuphaa ergama Amantaa fi biyyaaf beekkamtii kennuun shora /gahee/ guddaa waan taphatuuf, lammiin biyyattii hundumtuu Ayyaana isaa, Amantaa isaa fi aadaa isaa beeksisuuf qooda mataa isaa akka raawwatu Qulqulluun Sinoodoos ni beeksise. Torbeen kun lammiileen Itiyoophiyaa hojiiwwan gurguddoo biyya isaaniif raawwatan sadarkaa addunyatti beekkamtii itti argatan ta’uu isaa kan beeksise ergaan […]
December 12, 2019 in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Ayyaana Cuuphaa Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa Amajjii 11tti kabajamu hambaa Afuuraa addunyaa akka ta’u murteeffamuu isaa Mootummoota Gamtoomanitti Dhaabbatni Barnootaa, Saayinsii fi Aadaa kan ta’e UNESCON ni beeksise. Yaa’iin UNESCO Eegumsa Hambaalee irratti xiyyeeffatee biyya Kolombiyaa magaala Bogootaatti qopheesse irratti Ayyaanni Cuuphaa Itioophiyaa keessatti kabajamu Hambaa Afuuraa ta’ee akka galmeeffamu murteessuu isaa ni beeksise.
December 10, 2019 in Uncategorized /by EOTC Afaan Oromo
Waldaan Qulqullootaa piroojektii kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti hordoftoota Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa balaa uumamaanis ta’e nam-tolcheen miidhaan irra gahe qarqaaruu (deebisanii ijaaruu) fi Manneen Kiristaanaa cufaman bansiisuu dandeessiu ifa taasisuu isaa beeksise. Piroojektii Amantoota fi Mana Kiristaanaa keenya nageenya addunyaa fi eegumsa biyyaaf gumaacha guddaa goote cinaa dhaabbachuun qarqaaruu (deebisanii ijaaruu) dandeessisu kutaan […]
Waldaan Qulqullootaa si’aa’inaan eegamaa kan ture Tamsaasa idilaa sa’aatii 24 dhiheessii adda ta’ee fi haala yeroo waliin wal-simataa ta’een B.A. Muddee 5/2012tti akka jal qabu barreessaan ol’aanaa Waldaa Qulqullootaa Obboo Wub’isheet Otooroo ibsani. Yaada dhaggeeffattootni fi daawwattootni kennaa turan irratti hundaa’uun fi qu’annaa adeemsisuun akkasumas muuxannoo Manneen Kiristaanaa obboleewwanii irraa qooddachuun tamsaasichi yericha waliin kanb […]
December 6, 2019 in Uncategorized /by EOTC Afaan Oromo
Dubbii Maariyaam Dubbiin Maariyaamii qaama Barumsa hundee Mana Kiristaanaa /Doogmaa/ Ortodoksii keessaa isa tokko dha. Dubbii Fayyina dhala namaa keessatti fi, waayee seenaa Kakuu Haaraa fi Adeemsa hojii dhala namaa fiyyisuu Gooftaa Keenya Qoricha Keenya Iyyasuus Kiristoos keessattis barumsa murteessaa ta’e dha. Waaqayyoo iccitii addunyaa kana ittiin fayyise keessatti Dubbiin Maariyaami bakka guddaa fi iccitii […]
November 21, 2019 in Uncategorized /by EOTC Afaan Oromo
EOTCMK November 18, 2019 Biyya kan taate fi biyyattii kutannoo waliin eegdee dhaloota har’aaf kan dabarsite Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa eeguun dirqama mootummaa waan ta’eef muummicha ministeeraa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa kabajamoo Dr. Abiyyi Ahmad miidhaa amantootaa fi Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa irraan gahaa jiru akka dhaabsisan Waldaan Qulqullootaa xalayaan ni gaafate. Xalayaa muummicha […]
November 16, 2019 in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Kutaa dhumaa Dhaadheessitoonni tokko tokkoo uummata uummata waliin walitti buusuuf akkuma HEERA MANA KIRISTAANAA keewwata 4 (afur) irratti caqasameen sabbata waaqaa baroota dheeraaf akka asxaatti fayyadamaa turte fi ammas ittiin fayyadamaa jirtu guyyaa Ayyaanaa qabattanii baataniittu, baaxii manaa fi bantoo Mana Kiristaanaa irratti dibdaniittu jechuun amantoota burjaajeessuun, dargaggoota hidhuu, kana irraa darbee kutaalee lallabaa tokko […]
November 14, 2019 in Uncategorized /by EOTC Afaan Oromo
H.K.H.Roodaas Taaddasa (Dr.) Dilbata dhumaa kan tibba habaabootti hayyoonni Mana Kiristaanaa fi amantootni mooraa haadha keenya Mana Kiristaanaatti walitti qabaman onneen isaanii jaalala Deessuu Waaqaatiin boba’ee, dhandhama galata isheetiinis qalbiin isaanii quuftee, keessattuu, xummura sirnagalateeffannaa tibba habaabootti qalbii isaanii isa sirna galatoo galateeffannaa tibba abaaboo ishee dhumaa galateessee nagahe kan hin jenne sana gammachiisuu baatuus, […]
November 11, 2019 in Uncategorized /by EOTC Afaan Oromo
kutaa 5ffaa Kaayyoon ijoo dhaabbata dhimmoota maatii fi daa’immanii, daa’imman hawaasa waliin jiraatani tajaajila nyaataa, uffata fi yaalii fayyaa akka argatan haala mijeessuu dha. Keessattuu yeroo ammaa kanatti gochi gaarii daa’imman haadha fi abbaa hin qabne kununsaa guddisuun maqaa Mana Kiristaanaa keenyaan foyya’ee akka itti fufu yaadachiisaa; kutaalee lallabaa muraasa keessatti dhaabbatichi walii galee hojjechuu […]